मेरो बिहे गर्दिनुस भन्दा दुई दिन सम्म आमा बुवाले हाँसेर टार्नु भयो —राजा राजेन्द्र पोख्रेल - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
मेरो बिहे गर्दिनुस भन्दा दुई दिन सम्म आमा बुवाले हाँसेर टार्नु भयो —राजा राजेन्द्र पोख्रेल
लभ गफBanner News
२९ माघ २०७४, सोमबार १५:०८ 128
हास्य कलाकार एवं रेडियो अडियोका कार्यक्रम प्रस्तोता राजा राजेन्द्र पोख्रेलले आज माघ २९ मा ८ औं वैबाहिक वर्षगाँठ मनाएका छन् । उनले ८ वर्ष अघि आजकै दिन रेनुका वाग्ले संग लगनगाँठो कसेका थिए । प्रस्तुत छ वैबाहिक वर्षगाँठकै अबसरमा हास्य कलाकार पोख्रेलसंग करिष्मा के.सीले गरेको लभ गफ ।
उनीसंग पहिलो भेट दाइको बिहेमा जाँदा भएको । दाइको आफ्नै साली चाहि होइन साली पर्ने तर त्यतीखेर खासै केही कुरा भएन देख्ने बित्तिकै मन परेको होकी होकी जस्तो चाहि भयो ।
प्रपोज कसरी गरियो ?
प्रपोजनै गरिएन । प्रपोज गर्नै परेन, बीचमा केही समयको ग्याप पछि भेटघाट गरियो त्यतीखेर पनि खास कुरा भएन त्यसपछि भाउजूको माइत गएको बेला चाहि फोनमा कुराकानी भयो अनि त्यतीबेला थाहा भयोकी ए…लभ पो परिसकेको रहेछ भन्ने कुरा । अनी यसरीनै हाम्रो मायाप्रेम अघि बढ्यो ।
मायाप्रेममा रहदाको भेटघाट
भेटघाट खासै हुदैन थियो हाम्रो किनभने म काठमाण्डौं बस्ने रेनु झापा बस्ने । बरु एकचोटी चाही म झापाको कार्यक्रममा जादाँखेरी एरपोर्टमा भेटभएको थियो त्यसपछि पारिवारिक भ्रमण जादाँ कहिले काही भेट हुन्थ्यो ।
भेटमा हुने कुराकानी
भेटमा त झन कुराकानीनै नहुने । त्यही सन्चो बिसन्चो कस्तो छ ? मात्र हो ।
फोनमा हुने कुराकानी
भेट भन्दा फोन बाक्लो हुन्थ्यो । फोनमा चाहि हामी भविष्य सम्बन्धि बिहे सम्बन्धि कुराहरु गथ्र्यौं ।
घरमा कसरी जानकारी गराइयो ?
बिहेको कुरा छिन्नु पर्ने बेलामा भन्नै पर्ने भयो । आफ्नो बिहेको कुरा भन्न पनि अप्ठेरो अनि बुवालाई मैले भने सुनको भाउ त घटेछ, अनी बुवाले सुनकोे भाउ घटेर हाम्लाई के भयो त भन्नुभयो । अनि होइन मेरो बिहे गर्दाखेरी त सुन अली सस्तो पर्छ नि त भने बुवा हाँस्नुभयो । त्यो दिन हाँसेरै गयो अनी भोलीपल्ट फेरी कुरा कोट्याएर निकाले । आमालाई चाहि अली अली भनेको थिए । आमालाई आमा बुवालाई भन्दिनुस न भनेको तँ आफै भन भनेर फेरी आमा हाँस्नु भयो । त्यो दिन पनि हाँसेरै गयो । अनि तेस्रो दिनमा चाहि मिलाएर भने ।
कसरी भयो बिहे ?
घरमा भनेको एकहप्तामा उनी संगै बिहे भयो । खासै नाइ नास्ती गर्नु भएन , बाजा बजाएर जन्ती लगेर नै बिहे गरे ।
पहिलो पटक ससुराली जाँदाको अनुभव
पहिलो पटक ससुराली जाँदा त्यस्तो खास फरक अनुभव भएन । ससुराली गए जस्तो नै लागेन, यसो घुमफिरमा गएको जस्तो लाग्यो ।
श्रीमतीलाई मायाँले बोलाउदा
पहिले पहिले काली भनिन्थ्यो अनी रेनु पनि भनिन्थ्यो । बिहे पछि चाहि बन्टी भन्ने आयो यस्तै हो ।
धेरै छ कुन पो भनौं ? एउटा पारिवारिक हिसाब बाट हेर्दाखेरी खर्च ब्यबस्थापन चाही एकदम राम्रो छ ।अर्को मलाई केयर गर्ने कुरा यही नै हो ।
सामान्य अत्याबश्यक पारिवारिक झै झगडाहरु त हुन्छ नै त्यस्तो बेला फकाउने जिम्मा चाही जहीले मेरै भागमा पर्छ ।